» राजु र डिला दोहोरी च्याम्पियनको विजेता ?
राजु र डिला दोहोरी च्याम्पियनको विजेता ?
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०६:५४
मकवानपुर, २४ जेठ । चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को उत्कृष्ट १२ मा पुगेका राजु केसी र डिला बिकलाई उत्कृष्ट १२ मै पुगेका अन्य प्रतियोगीहरुले दोहोरी च्याम्पियनको सम्भावित विजेताका रुपमा चर्चा गरेका छन् । दोहोरी च्याम्पियनको होम सेसनमा प्रतिक्रिया दिँदै धेरै जसो प्रतियोगीहरुले राजु र डिलासँग दोहोरी भिडन्तमा डर लाग्ने बताएका हुन् । कतिपय गायक गायिकाहरुले राजु र डिलासँग फाईनलमा मात्रै भेट भए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरेका छन् । उत्कृष्ट १२ मा पुगेका प्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकी तथा रिता राउत क्षेत्री र सविन आचार्यको जोडीले पनि राजु र डिलासँगै आफुहरुलाई दोहोरी भिडन्तमा डर लाग्ने बताएका छन् । यो दुबै जोडीले राजु र डिलालाई उत्कृष्ट ५ जोडीमा पर्नसक्ने भन्दै चर्चा समेत गरेका छन् । उत्कृष्ट १२ मा नै पुगेका बबिता बानियाँ जेरी र शंकर क्षेत्रीले पनि उनीहरुलाई उत्कृष्ट ५ मा पुग्ने दाबेदारका रुपमा उभ्याएका छन् । दर्शक श्रोतामाझ पनि चर्चित रहेका राजु र डिलालाई प्रतिस्पर्धी कलाकारहरुले नै सम्भावित विजेका रुपमा चर्चा गरेपछि अहिले उनीहरु थप चर्चामा छन् । तर रोचक कुरा त के छ भने उनीहरुसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेका टिमले उनीहरुलाई सम्भावित उत्कृष्ट ५ तथा विजेताका रुपमा चर्चा गरेता पनि उनीहरु आफैले भने उत्कृष्ट ५ टिमको नाम लिँदा आफुहरुलाई समावेश गरेका छैनन् । तपाईको विचारमा के राजु र डिला नै फाईनलमा पुग्दै विजेता बन्लान् त कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
उत्कृष्ट १२ मा पुगेका अन्य प्रतियोगीहरुले राजु र डिलालाई सम्भावित विजेताका रुपमा चर्चा गरिरहेको समयमै राजु र डिलाले पनि उत्कृष्ट ५ मा पर्ने सम्भावित कलाकारहरु बारे चर्चा गरेका छन् । दोहोरी च्याम्पियनको होम सेसनमै कुराकानी गर्दै राजुले बबिता बानियाँ जेरी र शंकर क्षेत्रीको टिमसँग सुरुमै दोहोरी भिडन्त नपरिदिएहुन्थ्यो भन्ने लागेको प्रतिकृया दिएका छन् । उनीहरुसँग दोहोर िभिडन्तमा कहिले हार अनि कहिले जीत हुँदै गरेको भन्दै उनले दोहोरी भिडन्तमा डर लाग्ने टिमका रुपमा जेरी र शंकरलाई औँल्याएका थिए । त्यस्तै डिलाले भने प्रकाश पराजुली र मिना बढाथोकीलाई दोहोरी भिडन्तमा डर लाग्ने टिमका रुपमा चर्चा गरेकी थिईन् ।
राजुले उत्कृष्ट ५ मा पुग्नसक्ने टिमहरुमा प्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकी, बबिता बानियाँ जेरी र शंकर क्षेत्री, कल्पना दाहाल र प्रदिप रोका, जालुमाया गुरुङ र प्रितम पोखरेल तथा चिज गुरुङ र देवी आलेको नाम लिएका थिए । त्यस्तै डिलाले पनि प्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकी, बबिता बानियाँ जेरी र शंकर क्षेत्री, जालुमाया गुरुङ र प्रितम पोखरेल, बालचन्द्र बराल र शोभा कार्की तथा कल्पना दाहाल र प्रदिप रोकाको नाम लिएकी थिईन् । यसरी अन्य कलाकारहरुले उत्कृष्ट ५ भित्र राजु र डिलाको चर्चा गरेता पनि उनीहरु आफैले भने आफुहरुको नाम उत्कृष्ट ५ टिमभित्र लिएनन् ।
राजु र डिला दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट १२ मा पुगेका पहिलो जोडी हुन् । उनीहरुले प्रिती गिरी र अनुज अधिकारीको जोडीलाई १६.५ अंकले पछाडि पार्दै उत्कृष्ट १२ मा प्रवेश गरेका थिए । दोहोरीकी रानी पनि भनेर चिनिएकी डिलाको माईती सुर्खेतमा पर्छ । उनी हाल धादिङमा बसोबास गर्छिन् । उनी लोकदोहोरीकी परिचित गायिका समेत हुन् । लाईभ दोहोरीमा उनको निक्कै चर्चा छ । त्यस्तै विभिन्न दोहोरी प्रतियोगिताहरुमा समेत जित हासिल गरिसकेका राजु स्याङ्जाका हुन् । राजु चर्चित लोकदोहोरी गाायक हुन् । उनी लाईभ दोहोरीमा पनि निक्कै चर्चामा छन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–